रावललाई कसैले 'ज्यान मार्ने धम्की' दिएको छैन, नाम भने कारबाही हुन्छः मन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौं, २ माघ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भीम रावललाई कसैले ज्यान मार्ने धम्की नदिएको बताएका छन्।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले रावललाई बालुवाटारबाट ज्यान मार्ने धम्की नदिइएको बताएका छन् । यदि कसैले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भए नाम भन्न रावललाई उनले आग्रह गरेका छन् ।
धम्की दिनेको नाम भन्न सके उक्त व्यक्तिलाई कारबाही हुने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो। ‘भीम रावलज्यूको ज्यान मार्ने धम्की बालुवाटारबाट आयो ? यो तपाईंलाई पत्यार लाग्छ ? कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई मनपर्न सक्छ, मन नपर्न पनि सक्छ, विरोध हुन सक्छ तर ज्यान मार्ने धम्की भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। यस्तो कुरा हुँदा पनि होइन’, बाँस्कोटाले भने, ‘यदि छ भने कसले फोन गर्‍यो ? यो नम्बरबाट फोन आयो भनेर उहाँ (भीम रावल)ले भन्न सक्नुपर्छ। त्यसो भए काबारही हुन्छ।’
प्रवक्ता बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री पनि नेकपाकै नेता र भीम रावलसमेत नेकपाकै नेता भएकाले त्यो सम्भव नहुने प्रष्ट पारे। सँगै रावलसँग पनि सरकारी सुरक्षा फौज रहेकाले त्यो खतरा नहुने उनको ठहर छ।
‘प्रधानमन्त्री नेकपाकै नेता हुनुहुन्छ उहाँ (रावल) पनि। उहाँको सुरक्षा व्यवस्था सरकारले नै उपलब्ध गराएको छ’, उनले भने, ‘उहाँको ज्यानमाथिको सुरक्षा खतरा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले तरबार बोक्नु हुन्छ र खल्तीभरी गोलीको माला बोक्नुहुन्छ भनेर सोच्नु राम्रो होइन।’
केही दिनअघि नेता रावलले एक टेलिभिजनमा बोल्दै बालुवाटारबाट आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएका थिए ।